Uludağ Teleferik Seferlerine Bakım Sebebiyle Ara Verildi – RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara16 BursaUludağ Telefoonada baabuurta oo jabay Sababtoo ah dayactir
07 / 05 / 2019 16 Bursa, GUUD, Headline, Gobolka Marmara, TURKEY, TELPHER
adeegga gawaarida uludag ayaa hakad galay sababtoo ah dayactirka
Türkiyenin'n mid ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka ugu muhiimsan iyo dabeecadda kuwaas oo heli doona digniin ah inay Uludag yimid baabuur cable. Bursa-Uludag, oo bixisa gaadiid kale duwan oo u dhexeeya adeegga dayactirka xariijinta gawaarida ayaa la sameyn doonaa fasax bil ah.
Turkey ayaa Uludag by baabuur cable noqon doona digniin u yimid mid ka mid ah xarumaha dalxiiska jiilaalka ugu muhiimsan iyo dabeecadda. Waxaa lagu dhawaaqay in khadka tareenka ee bixiya gaadiidka kale ee u dhaxeeya bartamaha magaalada iyo Uludağ ayaa la daryeelay. Qoraal qoraal ah oo ka soo baxaya shirkadda Bursa Teleferik AŞ, oo ah xudunta ugu dheer aduunka ee 140, xarumaha 500 May-9 Bishii Janaayo iyo 6 ayaa xiran. U hubso inaad sii joogtid taariikhda taariikhda taariikhda.
Duufaan duufaan u ah baabuurta farsamada Uludağ
Uludag Waddada ayaa bilaabi doonta duulimaadkeeda dhamaadka bisha May
Goobta xayawaanka ee loo yaqaan 'helicopter'
Adeegyada telefoonka ee Bursa-Uludağ
Adeegga Isgaadhsiinta ee Uludağ waa la joojinayaa